ပုဂံရာဇဝင်ထဲက ဖောင်စင်္ကြာ (သို့မဟုတ်) ပျောက်ဆုံးနေသော ယာဉ်ပျံ – Lawkathuta
ပုဂံရာဇဝင်ထဲက ဖောင်စင်္ကြာ (သို့မဟုတ်) ပျောက်ဆုံးနေသော ယာဉ်ပျံ
စာပေနှင့်ရာဇ၀င်သမိုင်းကြောင်း May 20, 2018
အိမ်နီးချင်း တွေဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ ခမာနဲ့ထိုင်းတို့ကအလောင်းစည်သူမင်းကိုနတ်ဘုရားတစ်ပါးလို့တင်စားကြပါတယ်။အလောင်းစည်သူ မင်းကြီးဟာတိုင်ခန်းလှည့်လည်တဲ့အခါမှာဖောင်စကြာဆိုသည့်ယာဉ်ပျံကိုအသုံးပြုကာလှည့်လည်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အလောင်းစည်သူမင်း နတ်ရွာစံပြီးနောက်မှာတော့ ထို ဖောင်စကြာဆိုတဲ့ ယာဉ်ပျံ အကြောင်းကိုရေးသားထားခြင်းကို မတွေ့ရှိတော့ပါဘူး။
ထိုဖောင်စကြာဆိုသည့်ယာဉ်ပျံမှာအဘယ်သို့ရောက်ရှိသွားပါသနည်း အလောင်းစည်သူမင်း၏ဘုန်းကံကြောင့်ရရှိခဲ့သောဖောင်စကြာယာဉ်ပျံမှာအလောင်းစည်သူမင်းနတ်ရွာစံချိန်မှာရုတ်တရက် ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းလား ?ထို့ အလောင်းစည်သူမင်း၏ ဘဝနေဝင်ချိန်မှာအံသြဖွယ်ကောင်းလှသည်။
မိမိ၏သားအရင်းဖြစ်သော နရသူမင်း၏ခေါင်းအုံးနှင့်ဖိသတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။နရသူမင်း သည် ဖခင်အရင်း ကိုကိုယ်တိုင်သတ်မိသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိ၏အပြစ်ကိဆေးကြောရန်အတွက်ထုထည်ကြီးမားပြီးလှသောဓမ္မံရံကြီးဘုရားကိုအကြီးအကျယ်တည်ဆောက်စေသည်။အုတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားအပ်ထိုးလိုမရအောင်တည်ဆောက်စေသည်။
ထိုနောက်ဓမ္မရံကြီးဘုရား၏အတွင်းဘက်အခန်းနံရံများအားအသေပိတ်ပစ်စေပြီးထိုအခန်များအားတာဝန်ယူတည်ဆောက်စေသောဗိသုကာပညာရှင်များအားလည်နူတ်ပိတ်သည့်အနေဖြင့်သေဒဏ်ပေးသည်။ဓမ္မရံကြီးဘုရားသည် မြန်မာသာမက ကမ္ဘ္ဘ္ဘာကျော်သောဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်။ထိုအပြင် အာကာသပညာရှင်များ ၏ စိတ်ဝင်စား စေသော ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်။
ဓမ္မရံကြီး ဘုရား၏ တည်ဆောက်ပုံသည်အီဂျစ်ဘုရင်များ တည်ဆောက်ခဲ့သော ပိရမစ် များနှင့် များစွာ ဆင်တူသောကြောင့် အီဂျစ်တို့၏ဗိသုကာ ပညာနှင့် ပုဂံနိူင်ငံသားတို့၏ ဗိသုကာပညာ သည် ဆက်စပ်မူ ရှိနိူင်သည်ဟု အာကာသသိပ္ပံပညာရှင်များ ရှေးဟောင်းသုတေသန များကမှတ်ချက်ချကြသည်။
ထိုအပြင် အီဂျစ် တို့ ကိုးကွယ်သော နတ်ဘုရား တံဆိပ်များ နဂါး များ အားပုဂံဘုရားအခိူ့၌တွေ့ရှိရမူနှင့်တစ်ချိန်ကပုဂံဒေသကကိုးကွယ်ခဲ့သောနတ်နဂါးအရည်းကြီးကိုးကွယ်မူတို့သည်ဘုံဝါဒ တစ်ခုတည်းဖြစ်နိူင်သည်ဟုထင်ကြေးပေးကြပြီး သုတေသနများ လုပ်ကာရှာဖွေကြသည်။
ထိုအပြင် ပုဂံဒေသက ဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အဦးတို့သည်အရည်းကြီးတို့၏သာသနာနိကအဆောက်အဦးများ ဖြစ်နိူင်ခြေ ရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုဂံမင်းဆက်ပေါင်းများစွာအပေါ်အုပ်စိုးခဲ့သောအရည်းကြီးသာသနာသည်ှဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားလာချိန်တွင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သော်လည်းသက်သေပြစရာအဖြစ်နတ်ရုပ်များနဂါးရုပ်များနှင့်အရည်းကြီးတို့ကိုးကွယ်သောနတ်ဘုရားကျောင်းမှာ အဘယ်ကြောင့် မကြွင်းကျန်ရစ်သနည်း။
သမိုင်းသုတေသန အခိူ့က ထိုနတ်ဘုရား ကျောင်းများ အပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့က ပြန်လည်မွန်းမံ ဖြည့်စွက်ပြီး ဘုရားစေတီတည်ခဲ့သည်ဟုယူဆကြသည် ( ဤအယူအဆမမှန်နိူင် )ဓမ္မံရံကြီး ဘုရားအားအာကာသသိပ္ပံပညာရှင်များပိုမိုစိတ်ဝင်သွား စေသည့် အချက်မှာ နာမည်ကျော်အာကာသ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်နာဆာအဖွဲ့အစည်းထံမှလျိုဝှက်စွာပေါက်ကြားလာသော ဓါတ်ပုံ များထဲ့ တွင် ဓမ္မံရံကြီးဘုရားဓါတ်ပုံလဲပါဝင်လာသည်
ထို ဓါတ်ပုံ ကြောင့် အာကာသ သိပ္ပံပညာရှင်များမှာဓမ္မရံကြီးဘုရားအား ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့သည်။ဓမ္မရံကြီးဘုရားသည်လည်းစိတ်ဝင်စားရာကောင်းလောက်အောင် ပဟေဌိ များနှင့်ပြည့် နေသည်။
ိနရသူမင်းသည် အဘယ်ကြောင့် ဘုရားအတွင်းဘက်ခန်းရှိ နံရံများ အား အသေပိတ်ပစ်စေခဲ့သနည်း?တာဝန်ယူတည်ဆောက်သောပန်းရံပညာရှင်များအဘယ်ကြောင့် နူတ်ပိတ်ပစ်စေခဲ့သနည်း?
သုသေနသမားများ ရတနာသိုက် မုဆိုးများ ၏ပြောကြားချက် များ၌ ဓမ္မရံကြီးဘုရား၏ ဌာပနာတိုက်သည် သာမန်ဘုရားများ၏ ဌာပနတိုက်ထက်အလွန်ကျယ်ဝန်းသော အခန်းနှစ်ခန်း ဖြစ်ပုံရပြီးတစ်ခန်း၌ အလောင်းစည်သူမင်း ၏ ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်ရတနာများဌာပနာထားပုံရသည်ဟုထင်ကြေးပေးကြသည်။
ထိုပညာရှင်များ၏ မှတ်ချက်အရအလောင်းသည်စည်သူမင်း ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများထဲတွင် ဖောင်စကြာယာဉ်ပျံလဲ ပါနိုင်လောက်သည်။
အလောင်းစည်သူမင်းသည်မဟာသမုဒ္ဒရာအားသွားရာ၌ဖောင်စကြာဆိုသည့်ယာဉ်ပျံအားအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုဆိုရာတွင်ယခုခေတ်တွင်မဟာသမုဒ္ဒရာအားစကြာဝဋ္ဌာဟုသတ်မှတ်လျင်အလောင်းစည်သူမင်း၏ ဖောင်စကြာဆိုသည်မှာ အာကာသယာဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပေသည်။
ထို အယုအဆအားခိုင်မာအောင်ထောက်ပံပေးနေသည်မှာUFoများနှင့်Alienတို့အကြောင်းအားအသည်းအသန်လေ့လာနေသောနာဆာအဖွဲ့အစည်းထံမှဓမ္မံရံကြီးဘုရားအားရူထောင့်အမိူးမိူးက ရိုက်ထားသောဓါတ်ပုံများကြောင့်ဖြစ်သည်။ထိုအပြင် ပုဂံဒေသ ဘုရား စေတီ များ အပေါ်၌ ပျံဝဲနေသော UFO ယာဉ်ပျံ အခိူ့ အကြောင့်ပုဂံဒေသ၏ဘုရားစေတီအခိူ့သည် အာကာသသီအိုရီများ Alien Theory များ နှင့် ဆက်နွယ်မူရှိသည်ဟုကောက်ချချနိူင်ပေသည်။
ထိုအပြင်ပုဂံဒေသ ဘုရားစေတီ များ၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ကွင်းပြင်အကျယ်ကြီးများ၊ ပုဂံဘုရားအခိူ့အား လူတစ်ရစ်နတ်တစ်ရစ် တည်ဆောက်ခဲံသည်ဟုသော အယူအဆများ၊နာဆာအဖွဲ့အစည်းထံမှပုဂံဘုရား အခိူ့၏ ဓါတ်ပုံများကြောင့် ပုဂံဒေသသည် UFoများ Alien များနှင့် ပတ်သတ်မူရှိခဲ့လေ သလား ဟု ယူဆရသောသက်သေများဖြစ်သည်
ပုဂံရာဇဝငျထဲက ဖောငျစင်ျကွာ (သို့မဟုတျ) ပြောကျဆုံးနသေော ယာဉျပြံ
အိမျနီးခငျြး တှဖွေဈတဲ့ အိန်ဒိယ ခမာနဲ့ထိုငျးတို့ကအလောငျးစညျသူမငျးကိုနတျဘုရားတဈပါးလို့တငျစားကွပါတယျ။အလောငျးစညျသူ မငျးကွီးဟာတိုငျခနျးလှညျ့လညျတဲ့အခါမှာဖောငျစကွာဆိုသညျ့ယာဉျပြံကိုအသုံးပွုကာလှညျ့လညျခဲ့တယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ အလောငျးစညျသူမငျး နတျရှာစံပွီးနောကျမှာတော့ ထို ဖောငျစကွာဆိုတဲ့ ယာဉျပြံ အကွောငျးကိုရေးသားထားခွငျးကို မတှရှေိ့တော့ပါဘူး။
ထိုဖောငျစကွာဆိုသညျ့ယာဉျပြံမှာအဘယျသို့ရောကျရှိသှားပါသနညျး အလောငျးစညျသူမငျး၏ဘုနျးကံကွောငျ့ရရှိခဲ့သောဖောငျစကွာယာဉျပြံမှာအလောငျးစညျသူမငျးနတျရှာစံခြိနျမှာရုတျတရကျ ပြောကျကှယျသှားခွငျးလား ?ထို့ အလောငျးစညျသူမငျး၏ ဘဝနဝေငျခြိနျမှာအံသွဖှယျကောငျးလှသညျ။
မိမိ၏သားအရငျးဖွဈသော နရသူမငျး၏ခေါငျးအုံးနှငျ့ဖိသတျခွငျးကိုခံခဲ့ရခွငျးဖွဈသညျ။နရသူမငျး သညျ ဖခငျအရငျး ကိုကိုယျတိုငျသတျမိသညျ့အတှကျကွောငျ့မိမိ၏အပွဈကိဆေးကွောရနျအတှကျထုထညျကွီးမားပွီးလှသောဓမ်မံရံကွီးဘုရားကိုအကွီးအကယျြတညျဆောကျစသေညျ။အုတျတဈခုနှငျ့တဈခုကွားအပျထိုးလိုမရအောငျတညျဆောကျစသေညျ။
ထိုနောကျဓမ်မရံကွီးဘုရား၏အတှငျးဘကျအခနျးနံရံမြားအားအသပေိတျပဈစပွေီးထိုအခနျမြားအားတာဝနျယူတညျဆောကျစသေောဗိသုကာပညာရှငျမြားအားလညျနူတျပိတျသညျ့အနဖွေငျ့သဒေဏျပေးသညျ။ဓမ်မရံကွီးဘုရားသညျ မွနျမာသာမက ကမ္ဘ္ဘ်ဘာကြျောသောဘုရားတဈဆူဖွဈသညျ။ထိုအပွငျ အာကာသပညာရှငျမြား ၏ စိတျဝငျစား စသေော ဘုရားတဈဆူဖွဈသညျ။
ဓမ်မရံကွီး ဘုရား၏ တညျဆောကျပုံသညျအီဂဈြဘုရငျမြား တညျဆောကျခဲ့သော ပိရမဈ မြားနှငျ့ မြားစှာ ဆငျတူသောကွောငျ့ အီဂဈြတို့၏ဗိသုကာ ပညာနှငျ့ ပုဂံနိူငျငံသားတို့၏ ဗိသုကာပညာ သညျ ဆကျစပျမူ ရှိနိူငျသညျဟု အာကာသသိပ်ပံပညာရှငျမြား ရှေးဟောငျးသုတသေန မြားကမှတျခကျြခကြွသညျ။
ထိုအပွငျ အီဂဈြ တို့ ကိုးကှယျသော နတျဘုရား တံဆိပျမြား နဂါး မြား အားပုဂံဘုရားအခိူ့၌တှရှေိ့ရမူနှငျ့တဈခြိနျကပုဂံဒသေကကိုးကှယျခဲ့သောနတျနဂါးအရညျးကွီးကိုးကှယျမူတို့သညျဘုံဝါဒ တဈခုတညျးဖွဈနိူငျသညျဟုထငျကွေးပေးကွပွီး သုတသေနမြား လုပျကာရှာဖှကွေသညျ။
ထိုအပွငျ ပုဂံဒသေက ဗုဒ်ဓဘာသာအဆောကျအဦးတို့သညျအရညျးကွီးတို့၏သာသနာနိကအဆောကျအဦးမြား ဖွဈနိူငျခွေ ရှိသညျ။
အဘယျကွောငျ့ဆိုသျောပုဂံမငျးဆကျပေါငျးမြားစှာအပျေါအုပျစိုးခဲ့သောအရညျးကွီးသာသနာသညျှဗုဒ်ဓသာသနာထှနျးကားလာခြိနျတှငျပြောကျကှယျသှားခဲ့သျောလညျးသကျသပွေစရာအဖွဈနတျရုပျမြားနဂါးရုပျမြားနှငျ့အရညျးကွီးတို့ကိုးကှယျသောနတျဘုရားကြောငျးမှာ အဘယျကွောငျ့ မကွှငျးကနျြရဈသနညျး။
သမိုငျးသုတသေန အခိူ့က ထိုနတျဘုရား ကြောငျးမြား အပျေါတှငျ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတို့က ပွနျလညျမှနျးမံ ဖွညျ့စှကျပွီး ဘုရားစတေီတညျခဲ့သညျဟုယူဆကွသညျ ( ဤအယူအဆမမှနျနိူငျ )ဓမ်မံရံကွီး ဘုရားအားအာကာသသိပ်ပံပညာရှငျမြားပိုမိုစိတျဝငျသှား စသေညျ့ အခကျြမှာ နာမညျကြျောအာကာသ အဖှဲ့အစညျးဖွဈသညျ့နာဆာအဖှဲ့အစညျးထံမှလြိုဝှကျစှာပေါကျကွားလာသော ဓါတျပုံ မြားထဲ့ တှငျ ဓမ်မံရံကွီးဘုရားဓါတျပုံလဲပါဝငျလာသညျ
ထို ဓါတျပုံ ကွောငျ့ အာကာသ သိပ်ပံပညာရှငျမြားမှာဓမ်မရံကွီးဘုရားအား ပိုမိုစိတျဝငျစားလာခဲ့သညျ။ဓမ်မရံကွီးဘုရားသညျလညျးစိတျဝငျစားရာကောငျးလောကျအောငျ ပဟဌေိ မြားနှငျ့ပွညျ့ နသေညျ။
ိနရသူမငျးသညျ အဘယျကွောငျ့ ဘုရားအတှငျးဘကျခနျးရှိ နံရံမြား အား အသပေိတျပဈစခေဲ့သနညျး?တာဝနျယူတညျဆောကျသောပနျးရံပညာရှငျမြားအဘယျကွောငျ့ နူတျပိတျပဈစခေဲ့သနညျး?
သုသနေသမားမြား ရတနာသိုကျ မုဆိုးမြား ၏ပွောကွားခကျြ မြား၌ ဓမ်မရံကွီးဘုရား၏ ဌာပနာတိုကျသညျ သာမနျဘုရားမြား၏ ဌာပနတိုကျထကျအလှနျကယျြဝနျးသော အခနျးနှဈခနျး ဖွဈပုံရပွီးတဈခနျး၌ အလောငျးစညျသူမငျး ၏ ပိုငျဆိုငျသောပစ်စညျးမြားနှငျ့ရတနာမြားဌာပနာထားပုံရသညျဟုထငျကွေးပေးကွသညျ။
ထိုပညာရှငျမြား၏ မှတျခကျြအရအလောငျးသညျစညျသူမငျး ပိုငျဆိုငျသော ပစ်စညျးမြားထဲတှငျ ဖောငျစကွာယာဉျပြံလဲ ပါနိုငျလောကျသညျ။
အလောငျးစညျသူမငျးသညျမဟာသမုဒ်ဒရာအားသှားရာ၌ဖောငျစကွာဆိုသညျ့ယာဉျပြံအားအသုံးပွုခဲ့သညျဟုဆိုရာတှငျယခုခတျေတှငျမဟာသမုဒ်ဒရာအားစကွာဝဋ်ဌာဟုသတျမှတျလငျြအလောငျးစညျသူမငျး၏ ဖောငျစကွာဆိုသညျမှာ အာကာသယာဉျတဈခုဖွဈနိုငျပသေညျ။
ထို အယုအဆအားခိုငျမာအောငျထောကျပံပေးနသေညျမှာUFoမြားနှငျ့Alienတို့အကွောငျးအားအသညျးအသနျလလေ့ာနသေောနာဆာအဖှဲ့အစညျးထံမှဓမ်မံရံကွီးဘုရားအားရူထောငျ့အမိူးမိူးက ရိုကျထားသောဓါတျပုံမြားကွောငျ့ဖွဈသညျ။ထိုအပွငျ ပုဂံဒသေ ဘုရား စတေီ မြား အပျေါ၌ ပြံဝဲနသေော UFO ယာဉျပြံ အခိူ့ အကွောငျ့ပုဂံဒသေ၏ဘုရားစတေီအခိူ့သညျ အာကာသသီအိုရီမြား Alien Theory မြား နှငျ့ ဆကျနှယျမူရှိသညျဟုကောကျခခြနြိူငျပသေညျ။
ထိုအပွငျပုဂံဒသေ ဘုရားစတေီ မြား၏ပတျဝနျးကငျြ၌ကှငျးပွငျအကယျြကွီးမြား၊ ပုဂံဘုရားအခိူ့အား လူတဈရဈနတျတဈရဈ တညျဆောကျခဲံသညျဟုသော အယူအဆမြား၊နာဆာအဖှဲ့အစညျးထံမှပုဂံဘုရား အခိူ့၏ ဓါတျပုံမြားကွောငျ့ ပုဂံဒသေသညျ UFoမြား Alien မြားနှငျ့ ပတျသတျမူရှိခဲ့လေ သလား ဟု ယူဆရသောသကျသမြေားဖွဈသညျ
နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ ပထမဆုံးအဖမ်းခံရသူ (သို့) မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးမီးရှုးတန်ဆောင်
ခေါင်ဇာနည်ဝင်၊ ပြောင်မာတင် သည့်၊ မြရှင်သကျ သမ္ဗဒ္ဓု၏ ပုတ္ထ ရင်းစစ်၊ ဖြစ်ကြီးဖြစ်၍၊ မဟစ္ဆရိ၊ အံ့လောက်ဘိသား၊ တြိသာသနာ၊ စက်ရောင်ဝါနှင့်၊ မြန်မာမျိုးညွန့်၊ ညှိုးမတွန့်အောင်၊ သက်စွန့်လျက် ပင်၊ ရွှေလမ်းထွင်သား၊ အရှင်ဥတ္တမ၊ ထေရိန္ဒလျှင်၊ ဝံသပါလိတ်၊ ရဲတိဟိတ် သို့၊ စိတ်စေတနာ၊ စူးစိုက်စွာလျှင်၊ မဟာဝရဇိန်၊ …
မြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်း အပိုင်း (၁)
ဒါတွေကို သိဖို့အချိန်တန်ပြီ မြန်မာတို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်း အပိုင်း (၁) ************** မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် မည်သည့်အချိန်တွင် စတင်ရောက်ရှိလာသနည်း။ ဟူသည့် မေးခွန်းကို ဖြေဆိုရန်နှင့် စတင်ရောက်ရှိချိန်ကို မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် ရာဇ၀င်နှင့် ဘုရားသမိုင်း (စာအထောက်အထား) သက်သက်မျှမဟုတ်ဘဲခေတ်ပြိုင်အထောက်အထားများ၊ သုတေသနတွေ့ရှိမှုများဖြင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ထိုသို့ တိကျစွာမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်အတွက်- …
နန်းမတော်မယ်နုဟုဆိုလိုက်သည်နှင့် တိုင်းပြည် “ခိုက်” သောမြေးအဖွား (3)ဆက် (ပထမအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ရှုံးသူမယ်နု ၊သူ့သမီး ဆင်ဖြူမရှင် ‘နန်းတွင်းအာဏာလုပွဲအတွက် မင်းတုန်းမင်း၏သားတော်(40)ကျော်ကိုသတ် ကာ သီပေါမင်းကိုသူ့သမီး စုဖုရားလတ်နှင့်လက်ထပ်ပေးသူ၊ မြေးမတော် စုဖုရားလတ် သီပေါမင်းကိုကျော်၍ အမိန့်မနာခံသော)ဟု နာမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြားသူ အဖြစ်သိကြသလို အင်းဝရှိ မယ်နုအုဋ်ကျောင်းကိုလည်း မြင်ယောင်မိကြမည်ဖြစ် ပါသည်။ ဟုတ်ပါသည် …
ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ.. ဘယ်သွားမလို့လဲ
အစောင့်ရဲဘော်လေးက မေးလိုက်သည်..။ ပုံပန်းကိုလည်းကြည့်ပါဦးလေ..။ ခေါင်းမွေးတွေက စုတ်ဖွာ..၊ မေးရိုးကားကား မျက်စိပေါက်ကျဉ်းကျဉ်း ၀တ်ထားတာကလည်း စွပ်ကျယ်လက်တို တစ်ပတ်ရစ်ယောပုဆိုး..၊ သဲကြိုးနီ လေယာဉ်ပျံဖိနပ်နှင့် ပိန်ကပ်ကပ် မွဲခြောက်ခြောက်…. “ကျုပ် ဗိုလ်အောင် နဲ့ တွေ့ချင်လို့ပါ..” ရုံးကိစ္စလား အိမ်ကိစ္စလား ဆိုတော့ “အိမ်မှာတွေ့ပြီး ပြောမှဖြစ်မယ့် ရုံးကိစ္စပဲ..”တဲ့..။ ထိုသူသည်ပြောပြောဆိုဆို …
အင်းဝမြို့ဖြစ်တည်လာပုံမှစ၍ အင်းဝမြို့ပျက်​စီးရပုံသမိုင်း️ =============== 💖ပုဂံနေပြည်တော်ကြီးကို မွန်ဂိုတပ်များ ကျူးကျော် ဖျက်ဆီးပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်၊ပင်းယ၊ စစ်ကိုင်း၊ ဟံသာဝတီ၊ လောင်းကြက် အစရှိသည့် ပဒေသရာဇ်နိုင်ငံငယ်များအဖြစ် ပြိုကွဲကာ သူတစ်လူ ငါတစ်မင်း မင်းမူ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ 💖မွန်ဂိုကျူးကျော်စစ်ကို တွန်းလှန်ရာတွင်နာမည်ကြီးခဲ့သူ ရှမ်းညီနောင် သုံးဦးအနက် အငယ်ဆုံးဖြစ်သူ သီဟသူသည် ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ဒုဌဝတီမြစ်တို့ …